2. A Chit Sit Yae Tan Phoe V3 - Ma Naw
3. Ta Gar Phwint Htar Mal Ver1 - Shwe Htoo
1. MyMusic (ရေပန်းစားသီချင်းဝန်ဆောင်မှု)
2. Celebrity Movies
1. Buy One, Get One Free on All Pizzas Daily - Parami Pizza
2. 7% Discount for MPT users - Shwe Pyi Tan Silk
3. ၀တ်စုံ ၁၀စုံချုပ်လျှင် ၁ စုံလက်ဆောင် - Tha Mee Chaw
1. မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း၏ မလေးရှားယာဉ်မောင်း ခိုးမှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ကားမောင်းမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရ
2. ဘရူနိုင်းကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီး မြန်မာ ယူ-၂၂ အသင်း အကြိုဗိုလ်လုပွဲတက်
3. အကြမ်းဖက် သမားများ မြန်မာ့ပိုင်နက်အတွင်း ခိုးဝင်ပြီး ဒေသခံများကို မောင်းထုတ်ရန် ရည်မှန်းချက်ထား၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားသဖြင့် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းသွားရန်လိုအပ် ဟုဆို
1. EXO ရဲ့ လေးခွေမြောက်သန်းနဲ့ချီရောင်းချရတဲ့အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်လာတဲ့ ‘The War’
2. EXO ရဲ့အချပ်ရေသန်းချီရောင်းချရတဲ့ စတုတ္ထမြောက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့ ‘The War’
3. I.O.I အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနှစ်ဦးနဲ့အတူပွဲဦးထွက်လာတဲ့ မိန်းကလေးအဖွဲ့ Weki Meki
1. သွေးတွေ - အစ/အဆုံး
2. ၂၁ ၏ အချစ်ပုံပြင် - Chapter 1
3. ဗန္ဓတ် - အစ/အဆုံး
1. အင်တာနက်သုံးရင် ပိုက်ဆံအကုန်အနဲဆုံးနဲ့ လိုင်းအားအကောင်းဆုံးနည်းလေး?
3. မိမိထံခေါ်ဆိုသောဖုန်း တည်နေရာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
RB News ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ပါရှိသည့် တပ်မတော်သားများက ရွာသားများအား နှိပ်စက်၊ ဖမ်းဆီး၊ လုယက်သည် ဆိုသည့်သတင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု မမှန်မကန် သတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်း သာဖြစ်ဟု ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်၊ ဂေါ်ဒူသာရကျေးရွာ(တောင်) အတွင်းသို့ ဇန်နဝါ ရီ ၇ ရက် ညနေပိုင်းတွင် တပ်မတော်သားများ ဝင်ရောက်၍ ရွာသားများအား ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား ရိုက်နှက် ခြင်း၊ လိင်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် လုယက်ခြင်းများပြုလုပ်ကာ အမျိုးသားခုနစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် RB News Website ၌ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ တပ်မတော်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် အဆိုပါကျေးရွာသို့ သွား ရောက် ၍ ကျေးရွာတာဝန်ခံ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ရွာသူရွာသားများနှင့်တွေ့ဆုံကာ သတင်းမှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများနှင့် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ အနေဖြင့် ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် သတင်းရေးသားထုတ်လွှင့်မှုများမှာ မမှန်မကန်ရေးသား ထုတ်လွှင့်မှုများသာဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ ရှိရသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင်အဆိုပါ RB News Website သည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလည်း ဘင်္ဂါလီများသေဆုံးမှုနှင့်နေအိမ်များ မီး လောင်ဆုံးရှုံးမှုသတင်းများကို မမှန်မကန်ရေး သားထုတ်လွှင့်ခဲ့သဖြင့် တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်ထုတ် မြဝတီသတင်းစာတွင် သတင်းမှန် ပြန်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် မောင်တော ဒေသတွင် အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲ ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေတည် ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုများကိုလည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေး ညီ သတင်း ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းထုတ် ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအတွက် ပြည်တွင်းအလှူရှင်များ လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း NRPC ထုတ်ပြန်
ပြည်တွင်းအလှူရှင်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန၏ ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေ တွင် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း အမျိုး သား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) က ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက်တွင် သ တင်းထုတ်ပြန်သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မည့် ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရန်ကုန်တွင် ပါတီက အောင်နိုင်ရေးသင်တန်းပေး
ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲကျင်းပရန် သုံးလခန့်အလိုတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဒီချုပ်)က ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင် မည့် ပါတီကိုယ်စားပြုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရန်ကုန်မြို့သို့ ခေါ်ယူ၍ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး သင် တန်း စတင်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လွှတ်တော် အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းနေကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
လွှတ်တော်၏ တာဝန် သည် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကို လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပြီး ထိန်းကွပ် သွားရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လည်း လွှတ်တော်ကို အပြန်အ လှန်ထိန်းကျောင်းသည့် စနစ်ကို သုံးနေကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အ တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကပြောသည်။ သမ္မတအိမ်တော်၌ ဇန်န၀ါ ရီ ၉ ရက်က ပြုလုပ်သည့် အမျိုး သားစီမံကိန်းကော်မရှင် အစည်း အဝေးတွင် သမ္မတအပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်များ စုံစုံညီညီရှိချိန်၌ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်း အာမခံရရေး ထပ်မံ လျှောက်ထားဟု ရှေ့နေ ဆို
ကမာရွတ်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားလိုပြ သက်သေနှစ်ဦးဖြစ်သည့် လှို
နမ့်ဆန် မြို့တွင်းသို့ TNLA ယူနီဖောင်းဝတ် လက်နက်ကိုင်များ ဝင်ရောက် လာခြင်းကြောင့် ပြည်သူများ အထိတ်တလန့်ဖြစ်
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''နမ့်ဆန်မြို့အတွင်းကို ဇန်နဝါရီ ၁ဝ ရက် နေ့လည်ပိုင်းက တအာင်းလက်န
ဒီချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို တိုင်ကြားစာ ၁၀၀ ကျော်ရှိ ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးခန့်ကို အရေးယူရန် တင်ပြထားဟုဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များတိုင်ကြားစာဌာနသို့ တိုင်စာ ၁၂၃ စောင်အထိ ရောက်ရှိနေပြီး ယင်းတို့အနက် မှားယွင်းရောက်ရှိလာ သည့် တိုင်စာ ၄၀ ခန့်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ လူထုနှင့် အများဆုံးထိတွေ့ ရသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည် နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ အများဆုံး တိုင်ကြားခံရ ကြောင်း တိုင်ကြားစာများဌာန တာဝန်ခံ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြောသည်။
တရုတ်အထူးသံတမန်နှင့် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်မင်း တွေ့ဆုံ
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အာရှရေးရာ အထူးသံတမန် မစ္စတာ ဆွန်ကော်ရှန်နှင့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဗဟိုဌာန (MPC) ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးအောင်မင်းတို့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အစိုးရနှင့်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်လေးဖွဲ့ တွေ့ဆုံရေးညှိနှိုင်းမှု ရပ်တန့်နေ
အစိုးရကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (KIA)၊ တအာင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (TNLA)၊ ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (MNDAA)၊ ရခိုင်လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ (AA)တို့ ပါဝင်သည့် မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်လေးဖွဲ့ တို့ တွေ့ဆုံရန် ညှိနှိုင်းမှုရပ်တန့်နေ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အမည်ဖြင့် ပါတီ မှတ်ပုံတင်မည်
၎င်းက ''ခုဆွေးနွေးတာကတော့ နာမည်ကို ပြန်ယူတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်၊ ပြီးတော့ တည်ထောင်လိုသူ အကုန်လုံး ၁၈ ဦးရွေးတယ်
ယာဉ်လိုင်းနှစ်ခု ထပ်တိုးကြောင်း ကြေညာ
ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တွင်စနစ်သစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်လိုင်းလမ်းကြောင်းများကို လိုအပ်လျှင် ထပ်မံတိုြး